Madaxda al-Shabaab oo qirtay ujeeddadooda ah laynta shacabka
Ururka dilaaga ah ee arxanka daran ee al-Shabaab iyo madaxdiisa ayaa caddeeyeen ujeeddadooda ah inay maalin walba daadiyaan dhiigga dadka rayidka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan.
Warbixin uu ururkaas dilaaga ah kasoo saaray weerarradii ay maalmihii lasoo dhaafay la beegsanayeen shacabka ee ku sugan goobaha ganacsiga kuwaasoo dhimashada iyo dhaawaca ay sababeen gaarayaan ilaa 70 qof.
Kooxdaas diinta ku been abuuratay waxay baraheeda internet-ka ku sheegtay in weerarradaas dadkii lagu laayay dhammaan ay ahaayeen shaqaalaha Dowladda Federaalka Soomaaliya laakiin sida la ogyahay dadkaas intooda badan waxay ahaayeen dad shacab ah oo masaakiin ah oo aan waxba galabsan.
Muddo bil gudaheed ah waxaa magaalo madaxda Soomaaliya ka dhacay ilaa 12 qarax oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac u geystay dad rayid ah, iyadoo sidoo kale qaraxyadaas sababeen burburka ganacsiyada dad badan oo aan waxba galabsan.
Meel ku dhaw isgoyska Dabka ayaa mid ka mid ah qaraxyada uu ka dhacay kaasoo loo adeegsaday gaari walxo qarxa ka buuxeen. Dadka weerarkaasi ismiidaaminta ah ku dhaawacmay ee la yaqaan waxaa ka mid ah Sheekh Yuusuf Cali Ceynte oo ah Guddoomiyaha Majmaca Culimada Soomaaliyeed.
Todobaadkii ugu dambeeyay bisha Maarso keliya, ku dhawaad 10 qarax ayaa ka dhacay Muqdisho, dad ku dhaw 70 qof ayaana la sheegay inay ku dhinteen qaraxyadaas oo ay al-Shabaab fuliyeen. Marka in madaxda ururka al-Shabaab ay ku faanaan qaraxyadaan ay la beegsadeen shacabka Soomaaliyeed waa arrin lagu yaqaanno, waxayna haddana caddeyneysaa ujeeddadooda ah inay dadka rayidka iska laayaan.